VNC အကြောင်း [Tutorial]
Myanmar IT Resource Forum
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » VNC အကြောင်း [Tutorial]
1 VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 10:54 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 392
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-20
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 55
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 611
VNC ဆိုတာ Virtual Network Computer ကိုခေါ်တာပါ။ သူကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးသလဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကနေ တစ်ခြားကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပါ။ RAT လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ Remote Administration Tools ပေါ့။
RAT ဆိုတာက Program အမျိုးအစားပါ။ Server ကနေ Client ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ Program တွေမှန်သမျှကို RAT လို့ခေါ်ပါတယ်။
VNC ဆိုတာက Program ရဲ့နာမည်ပါ။ IT Technician တွေဟာ VNC ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးသလဲဆိုတော့ ထိုင်ရာမထ စက်ပြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ဆိုင်တွေပေါ့။ Client မှာ User ကပြဿနာဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်ကလဲမထချင်ဘူး။
စော်နဲ့ကျူတာအရှိန်ရနေပြီလေ။ (ကိုဆာမူရိုင်း၊ ကိုရှင်းသန့်၊ ကိုဆိုလာကိုကို တို့လိုပေါ့)။ အဲလိုအချိန်မျိုးမှာ VNC နဲ့ အဲဒီကွန်ပျူတာကို ၀င်ပြီး ပြင်လိုက်ရတာမျိုးက တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။ ကဲ.....နိဒါန်းမှာတင် တော်တော်ရှည်နေပြီ။ စလိုက်ရအောင်။
မှာ VNC ကို Download လုပ်ပါ။
ပြီးရင် စက်တစ်လုံးချင်းစီမှာ Install လုပ်ပါ။
Install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Password ပေးမလားလို့မေးပါလိမ့်မယ်။ ပေးလိုက်ပါ။ စက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Password မတူအောင်ပေးလို့ရသလို အတူတူလဲပေးလို့ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Finish ပေါ့။
ပြီးရင်တော့ Start ---> Real VNC --> VNC Server4(service mode) --> Start VNC Service ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Start ---> Real VNC --> VNC Server4(user mode) --> Start VNC Server ကိုနှိပ်ပါ။
အောက်က Tray Icon ထဲမှာ Right Click ထောက်ပြီး Add New Client ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ Ip (သို့) Computer name ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် password လာတောင်းပါလိမ့်မယ်။ Password မှန်အောင်ဖြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သူ့စက်ထဲကို ၀င်လို့ရပါပြီ။
အဲဒီလိုမကြည့်ချင်ရင် Start ---> Real VNC --> VNC Viewer4---> Run VNC Viewer ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်ရင်လဲ ရပါတယ်။
Last edited by z3r0c00l on 28th April 2010, 9:46 am; edited 1 time in total
2 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 11:06 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 786
တညျနရော : လောကအပြင်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-22
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 114
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 1546
ကွန်နက်ရှင် ကောင်းမှ ဒေါင်းပြီး စမ်းကြည့်ဦးမယ်
ဒါမျိုးရှိ တာပြောပြော ကမစောဘူး
ကျနော် ကိုရှင်းသန့် ၊ကိုဆာမူရိုင်းတို့ လောက် မကြူပါဘူးဂျာ.
3 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 12:19 pm
MITR New User
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 39
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-12
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 1
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 75
စမ်းကြည်နေတာ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတယ်
4 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 12:26 pm
port တွေ ပြောင်းရသေးလား
unable to connect to host : A socket operation was attempted to an unreachable host. (10065)
အဲစာသားပဲ ပေါ်လာတယ် ဘယ်လိုလဲမသိဘူး
5 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 4:23 pm
lwenay wrote: port တွေ ပြောင်းရသေးလား
အကုန်လုံး Default ပဲထားတယ်
Last edited by solakoko on 8th August 2010, 10:15 am; edited 1 time in total
6 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 6:15 pm
မ၇သေးပါဘူးခင်ဗျာ software များမှားနေလား မသိဘူး
7 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 8:42 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 1218
တညျနရော : cyberoot
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-05-24
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 75
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 1576
ok သိတွားပါပြီ အဲဒီကောင်လေးဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာ
8 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 30th March 2010, 8:57 pm
ISA server ထည့်ထားတာနဲ့များဆို်င်မလားမသိဘူးနော်
vnc error connection failed ပြသွားတယ်ဗျာ
9 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 21st April 2010, 12:28 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 90
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-01-15
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 9
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 136
software ကို download ချတာ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဗျာ အဆင်ပြေတဲ့သူတွေ ပြန်တင်ပေးပါလာ ကျွန်တော် မ၇ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ ကိုဆိုလာကိုကို ဆီမှာ ရှိ့ရင်ပြန်တင်ပေးပါလာ နော်
10 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 21st April 2010, 3:56 pm
Sorry ကိ်ု pooqee ရေ
ကျနော်အိပ်ပျော်သွားလို့ခုမှတွေ့ တယ်
File size က KB ပဲရှိတယ်
Last edited by solakoko on 8th August 2010, 10:18 am; edited 1 time in total (Reason for editing : updated)
11 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 24th May 2010, 5:08 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 18
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-09-15
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 27
ဟုတ်ကဲ့..နောက်ထပ်တစ်ခုရှိပါတယ်..hidden administrator တဲ့..အဲဒါလေးလည်းကောင်းပါတယ်..သူကလည်း..ဆာဗာ..ကလိုင်းရင့်ရ်..ပါဘဲခင်ဗျာ..မှားရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါနော်..
12 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 26th May 2010, 9:21 am
ကိုဇီးရိုးရေ လုပ်ပါအုံး လုံးဝ စမ်းလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပါလာ ကျွန်တော် install လုပ်တာ Password မတောင်းပဲ ပြီး သွားတယ် ပြန် သုံးတော် ပြဿနာတက်နေတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါလာ အခု ကိုဇီးရိုး လည်း အွန်လိုင်းမှာရှိတုန်ူးလေ နော်
13 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 26th May 2010, 9:45 am
ဟီး...ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။ ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲလုပ်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်လုပ်လို့ရသလောက်ကို ပြန်ပြီးတင်ပေးပါ။ ဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုရင်တော့ Server ကို Windows ပြန်တင်ကြည့်ပါလား။ (ဒီလောက်ပဲပြောတတ်တော့တယ် )
14 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 26th May 2010, 10:18 am
ကျေးဇူးပဲ ဗျာ ကျွန်တော် စမ်း တာ အဆင်ပြေသွားပြီးဗျ အခု လို ဆော့ဝဲလ် မျိုးတွေ ရှိသေးရင် တင်ပေးပါအုံး နော် ကိုဇီးရိုး
15 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 7th August 2010, 10:47 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 8
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-08-06
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 0
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 8
Thank you ပါ z3r0c001 ရေ အဆင်ပြေတယ်ဗျ ကျေးဇူးတင်စကားလေးတော့ပြောသွားပါတယ်
16 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 10th October 2010, 10:49 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 2
တညျနရော : yangon
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-10-07
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 2
windows7မှာအဆင်ပြေလားဗျ...စမ်းတော့မစမ်းရသေးဘူး...free version မှာ w7 မှာ cross ပြထားလို့
17 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 13th October 2010, 10:48 am
ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဗျာ....လမ်းညွန်ကြပါဦး...print screen လေးများရှိရင်ပြကြပါ
18 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 13th October 2010, 7:41 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 1
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-10-13
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 1
ကျေးဇူအကိုရေ ကျွန်တော်လဲဒေါင်းသွားတယ်နော် ................
19 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 22nd October 2010, 5:20 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-10-11
vnc server ကျသွားတဲ့အခါ ကျ ရင် ဒာခြားကွန်ပျုတာ ကနေ ဘယ်လို ပြန်ပြီး ဖွင့် ရလဲ သိချင်လို့ ပါ...
မနေ့ က vnc server ကျ သွားတယ်လေ..ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးချိတ်ဆက် ပြီးသုံးတာ.အဲဒါ vnc disable ဖြစ်သွားတယ်..
restart လုပ်လည်း ပြန်မတက်လာဘူးလေ...တော်တော်လေး အကျပ်ရိုက်သွားတာပဲ..internet သုံးလို့ မရတော့ ဘူးလေ...ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ..နည်းလမ်းရှိရင် ပြောပြပေးကြပါနော်
20 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial] on 21st December 2010, 11:38 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 5
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-09-15
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 5
အစ်ကိုရေVNCကDEMO version ဖြစ်နေတယ်.....။
full version လေးမရှိဘူးလား...?
21 Re: VNC အကြောင်း [Tutorial]